Ntughari Ntuzi BSF Maghaot Cultivation • Yurie BSF
Ngwọta anụ ụlọ
Enweghị Zụrụ Nri
Maggot bụ ndepụta ọzọ maka azụ na ọkụkọ.
Gbaa mbọ hụ na azụmahịa gị na-aga n'ihu na-eto eto.
Na-enweghị ibu arọ na ịzụta pellets
Ebe nke Modern BSF Maggot Ranch na-enweghị ụta
Chọrọ ịmara ebe kachasị mma n'obodo gị?
Kedu: Akpaghị aka ọnọdụ gị achọpụtara site na usoro a gosiri site n'usoro ọnụ ọgụgụ nke koodu nzi ozi.
Nanị pịa bọtịnụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ebe ziri ezi, biko jupụta na kọlụm oghere ụdị obodo / obodo ebe ị nọ ugbu a.
Ọnụ ego efu
Ịmepụta ngwa ngwa nke obere onye agha dị mfe ma dị ọnụ ala, anyị nwere ike iji mkpofu, ihe mkpofu na nri.
Ihe oriri zuru oke zuru ezu, amino acid na protein dị elu na-enyere aka nke ọma ụmụ anụmanụ na-akwalite uto nke anu ulo.
MGBE ỌTỤKWU NDỊ ỌZỌ AJỤGHỊ SMELL, Free download dị mma ma dị jụụ. SAFE abụghị ihe ngosi ndị obodo ma bụrụ ihe na-ewute ndị ọrụ ugbo.
Modern BSF Maggot na-enweghị Bau na-achọ imepụta ikpuru maka azụ na azụ anụ ọkụkọ.
Ịzụlite ikpuru ezi kwesịrị ịbụ nke na-enweghị ntụpọ, n'enweghị igwe, na-enweghị ọgwụ ọjọọ na-enweghị mkpesa ka e wee nwee ike gbanwee ya.
Nchekwa n'ihi na ndị ezinụlọ na-egosighi ya na nke ọma na ime ya.
Nọgide Na-azụ Ọtị
E nwere ike ịkụzi ihe ndị nwere ike iji kpoo ahịhịa ma tinye ya na mikot pasta, ntụ ọka na maggot pellets ma ọ bụ na-adị ndụ (ọhụrụ magot)
N'ụzọ dị otú a ị nwere ike inwe ọtụtụ anụ ụlọ n'ezighi azụ ahịa site na ụlọ ahịa ọzọ.
Nlekọta nri na ntanetị nri Goodbye.
Gaa n'ihu ngwa ngwa Maggot
Maggot Marketing? ZE YURIE BSF !!!
Okwesighi ka i ghaghi itughari uche banyere ahia ahia.
N'ihi Yurie BSF ga-azụ ya.
Gaa n'ihu na Maggot Marketing
Yurie BSF enyewo Rp100.000.000 ezigbo enyi aka / ndị mmadụ maka mmepe azụmahịa.
A na-enye ego inye aka iji mepụta ikike mmepụta.
Akwụghachi ụgwọ ego na mgbidi na-enweghị FLOWERS - Ọ dịghị RIBA !!!
Gaa n'ihu Ogoro ego
Ị GA-AGBA ỌZỌ.
AMBASSADOR YURIE BSF dị njikere ịbịa n'ugbo gị.
AMBASSADOR Yurie BSF dị ugbu a karịa obodo 100 iji nye nduzi bara uru na ugbo ha.
Lelee ebe 99
Na YURIE BSF UNIVERSITY ị ga-enye ọzụzụ dị elu.
Iji hụ na nhazi oge BSF nke oge a na-enweghị isi dịka SOP (usoro ịme ihe nhazi) nke nsị BSF na-enweghị isi.
Yurie BSF University gara n'ihu
Dịka enyi nke Yurie BSF, ị na-akpaghị aka na KOPERASI MAGGOT INDONESIA.
Ogwe ụlọ ọrụ maka ụzụ ịzụ na ire na azụmaahịa azụmahịa ndị ọzọ.
Ị ga-enweta uru nke ịkekọrịta ihe ndị fọdụrụ na azụmahịa nke azụmahịa na Indonesian.
Nọgide na-arụkọ ọrụ na Maggot Indonesian
Bụrụ otu akụkụ nke obodo Yurie BSF iji kwalite azụmahịa Maggot n'ime ụwa aghara aghara.
Nzọụkwụ a na-enwe ike izute ahịa ahịa ụlọ na nke ụwa.
Gaa n'ihu Agroindustry
A na-ezube usoro CSR a maka ndị chọrọ ịmụta, ma ha enweghị ike ị nweta ngwugwu nke BSF n'oge a n'enweghị isi ísì
Gaa n'ihu CSR
Malite ihe omume kwa ụbọchị n'ekpere iwu ka ị na-aga ụbọchị niile na Chineke.
Ya mere, usoro a Yurie BSF bụ MAIN na NUMBER Otu n'ime usoro ọrụ niile.
Gaa n'ihu Ekpere
Lelee ebe 99 nke Maggot Ranch
Ihe mere ndi okike hụrụ n'anya Yurie BSF
Ịmụta ịzụlite ihe na-enweghị isi na-adị mfe site na mmemme a nwalere nke ọma.
Nduzi nyere bụ n'ezie maka ihe ịga nke ọma m gụnyere ịnakwere ihe ubi nke azụmahịa m
Mbak Yurie ndidi na-eduzi m bụ ihe pụrụ iche, na-arụsi ọrụ ike n'ọfịs abụghị nsogbu n'ihi na onye nlekọta bụ nnukwu ndidi
Lelee ebe 99 nke Maggot na-enweghị Bau Ranch
Ndị na-azụ anụ?
MGBE ịghara ịzụta ego ịzụta pellets, 99% ndị ọrụ ugbo a na-azụ anụ na ndị ọzọ na-azụ ahịa n'ihi na ha enweghị ike ịkwụ ụgwọ nnukwu nri nke na-eru 60-70%, ọ bụrụ na ị bụ onye mbido mmepụta mmepụta, karịsịa nri pụrụ ọbụna iru 80%.
Ndi oru ugbo ulo anu ulo?
Enweta ego ịzụ anụ ọkụkọ na-enye aka na 82%. Ị na-eme nke a site n'ime ka anụ ọkụkọ gị na-eri nri na ihe ndị dị na nsị, dịka ntụ ọka ntụ ọka ka oke ịzụ anụ ọkụkọ gị karịa. Oge eruola ịchekwa ego ma lekwasị anya na ịnọgide na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke anụ ụlọ gị
Na-amụ Ihe N'ebe ọ bụla
Naanị lelee anya na nkuzi vidio na-agagharị maka ịkụ mkpụrụ BSF n'enweghị isi ísì.
Etu ibudata ngwa Yurie BSF na Playstore.
Gaa n'ihu Ntuzi
Download Otu esi edozi
Maggot maka Nri Anumanu
Iji nweta nsonaazụ kachasị si na BVF, tupu e nye gị dịka azụ na azụkọ anụ, anyị nwere ike ikwu na ị ga-ebu ụzọ mee ya n'ime:
Ọhụrụ / ndụ ndụ
Otu esi emezi Maggot maka nri anụ
Ụzọ dị mfe iji mụta ịzụlite ikpuru na-enweghị ntụpọ.
Na-agagharị n'okporo ụzọ
Otu n'ime ihe mgbochi iji nweta ihe ịga nke ọma bụ ihere nke ịjụ, Yurie BSF na-enye ọrụ ndị ahịa pụrụ iche, iji zaghachi ihe banyere azụmahịa azụ na usoro ndị ọkachamara maka ikpuru.
Kpọọ ugbu a kwa
Onye ọ bụla maara ijiji. Ndị ahụhụ a gbara anyị gburugburu. Ha na-abịa n'ihi na ha na-anụ ísì ụtọ nri. E wezụga ijiji ndị a, ha na-ebute ọrịa ndị ọrịa na-efe efe dịka ụkwara nta (ụkwara nta), dysenteryamuba, cholera na ọrịa ndị ọzọ dị iche iche.
Mgbasa nke ọrịa a site na nri ndị ụmụ mmadụ na-eri mgbe ha jupụtara na ijiji. Ma n'ezie ijiji na-ewetara ụmụ mmadụ ọtụtụ uru.
Ụkwụ bụ ụdị ahụhụ (nchịkwa nke cyclorrapha diptera), ijiji na-enwe obere antenna, nwee nku abụọ abụọ bụ nke mbụ nku seapsang na otu nku nta nke na-arụ ọrụ iji nọgide na-arụ ọrụ mgbe ha na-efe efe.
Ọkụ Ndị Na-efe Ọrịa
Gịnị mere ejiji ji akpọ ahụhụ ụmụ ahụhụ? N'ihi na mgbe ijiji na-ada n'ebe ruru unyi, mgbe ahụ gbasara 125.000, a ga-ahapụ germs ebe ha na-ala.
Nke a na-eme n'eziokwu n'ihi ụzọ pụrụ iche nke ijiji azụ. Mgbe ha na-ada nri, tupu ha amalite ịkụ azụ, ha ga-ahapụ mmiri si n'ọnụ ya.
Ọrụ mmiri dị ka enzyme nke na-enyere aka mgbaze nri. Mmiri mmiri a na-agbọ agbọ na-ahapụ nri ma ọ bụrụ na ụmụ mmadụ eri ya, enwere ike ịhụ ọrịa dị iche iche.
Ihe Ndị Dị Mkpa Banyere Ijiji
Uji na-abịa n'ụlọ n'ihi na ha na-anụ isi nri. Iji kpochapu ya, debe ihe oriri n'ime akpa ebe nfe enweghị ike ịnọdụ ala.
Iji nweta nri, ijiji na-arụsi ọrụ ike n'ụbọchị. Ụda dabere na ụdị ya nwere ike ịmepụta n'etiti ntanetị 75-126 na ọkpụkpụ n'ime ụbọchị 1-4.
N'ihe na-eme, njiri 5 ga-eme ka ọ ghara ịdị ndụ, ọ bụrụ na ụmụ mmadụ na-eri ya, ọ ga-eme ka afọ ọsịsa na ihe ndị ọzọ.
Ụzọ ndụ ndụ dị iche iche, dị n'etiti 5 na 30 ụbọchị. Ogo BSF na-ebi obere oge na 5-8 kwa ụbọchị ka oji na-acha ndụ ndụ ruru 30 n'ụbọchị.
ejiji na-efe efe na ọsọ ọsọ banyere XNXX kilomita kwa awa, nke a bụ ihe na-akpata ihe mkpofu ma ọ bụ nri anyị tụfuru ga-apụ n'oge na-adịghị anya.
Karịsịa na gburugburu ebe ebe ndị na-achị ụgbọ na-amị mkpụrụ.
Uru nke ijiji maka ụmụ mmadụ
Ihe ejiji bụ ụmụ ha, a na-akpọkarị ha ma ọ bụ ikpuru ma ọ bụ magot ma ọ bụ kape ma ọ bụ maggot ma ọ bụ ihe siri ike ma ọ bụ uget-uget na ihe ndị ọzọ.
N'ebe ụfọdụ, ụmụ mmadụ na-ere azụ maka oriri ụmụ mmadụ. Ha na-enye mpụta menu pụrụ iche dị ka onyinye, ofe na Pizza.
Na ụwa nke nkà mmụta ọgwụ, ụmụ ahụhụ, ya bụ ikpuru ma ọ bụ larvae ma ọ bụ maggot ma ọ bụ uget-uget, a na-eji dịka ngwá ọrụ ọgwụgwọ maka ọrịa ndị a na-akpọkarị "ọgwụ ọjọọ".
Ebe a na-etinye akụkụ ndị ahụ gburugburu ọnya ahụ iji rie anụ ahụ na anụ nke ọnyá ndị na-emerụ ahụ nke na-ebute ọrịa, gbuo bacteria ma rie anụ nwụrụ anwụ. Ime ka ọ dịkwuo mfe maka ọgwụ iji kpuchie ọnyá.
Magot na-ejikarị ndị uweojii eme ihe iji chọpụta afọ nke ozu na ọtụtụ ikpe mkpegbu.
Uru ọzọ bụ na ọ bụ ụlọ ọrụ dị iche iche na-ejikarị mkpụrụ ndụ refilin eme ihe. Ike ya na ngwa ngwa ya siri ike karia nke osisi saba.
Ngwurugwu refilin nwere ike ịgwọ ọrịa dịgasị iche iche nke akwara na azụ. Ebe akwara abụọ ahụ na-egbochi ọbara na ikuku oxygen na ụbụrụ.
Na mgbakwunye na ahịhịa na nje bacteria, ikpuru na-agụnye ndị na-eme ihe mkpofu, ihe mkpofu ụlọ, ihe mkpofu ụlọ, mkpofu mmadụ, anụ ụlọ, anụ na ihe ndị ọzọ.
Uru ọzọ nke ọtụtụ ndị na-ebi n'Andonesia na-edozi akụkụ ndị a n'ime nri anụ ahụ na anụ ọkụkọ ọzọ maka azụ na anụ ọkụkọ.
A na-edozi ikpuru mbụ n'ime ntụ ọka, mikot na mikot, ntụ ọka ọhụrụ, Chrispy maggot, ikpuru ahihia, mkpisi ahịhịa, oyi kpọnwụrụ, ikpo ọkụ na ihe ndị ọzọ.
A na-enye ọgwụ ndị a ozugbo maka anụ ụlọ ma ọ bụ echekwa dịka ihe oriri maka azụ, anụ ọkụkọ na nri anụ ụlọ.
Iji eriri anụ nri anụ ahụ na nke ọzọ a na-eji ya eme ihe n'ihi na ikpuru bara ọgaranya na nri, amino acids zuru ezu na nnukwu protein. Ngalaba nwere protein sitere na 40-56%.
Anatomy na usoro ndu
Ahụ dị iche iche na-akpụzi ijiji. ụfọdụ bụ obere, abụba, nnukwu na obere dabere na ụdị ha.
N'ozuzu ha nwere ikike dị mma iji gbanwee ihe na-eme ka ikuku.
Isi nke ofufe ahụ nwere nnukwu nnukwu oghere dị n'akụkụ na aka nri nke isi, antennae, ocelli, ọnụ. Anya nwere ike ibughari na isi.
Akwụ nwere eriri ndị na-enwe mmetụta dị nro ma dịka ngwá ọrụ iji chịkwaa ntụziaka nke echiche banyere usoro ahụ.
Nke mere na ọ dị nhịahụ ịrụ ọrụ ufe, na-atụghari ma na-agagharị n'otu oge iji chọpụta ọdịdị nke ihe ahụ.Ọ dịghị ụdị anụ ọ bụla nwere ezé.
Ihe na-ejupụta ijiji bụ obere mkpụrụ (pollen) na nri mmiri. Maka nri siri ike ha enweghị ike iri ya.
Ma ụfọdụ ụdị ijiji tabanidae nwere mma dị n'ọnụ ha iji mee ka ọkpụkpụ gafee ma ṅụọ ọbara ha.
Ọrụ bụ ijide nku ma nwee akwara ụgbọ elu na mpaghara nke abụọ. Akụkụ otu na atọ dị obere. N'akụkụ nke atọ nke thorax nwere mgbidi dị ka counterweight mgbe ọ na-efe efe.
Mmezi nke ijiji
Mgbe mating ma ọ bụ mating ha ọnọdụ ihu na otu ntụziaka, na ọnọdụ nke nwoke fly bụ n'elu nne ahu.
Oge na-adịghị anya mgbe ọnọdụ nke agbakọ ahụ laghachi azụ. Nne nwanyi di ime di ime ga-achọ ebe di nso ma obu karia nri iji tinye akwa.
Ewezuga ụdị BSF fly (Hermetia illucien) nke na-etinye àkwá nke àkwá ọ bụghị n'elu nri kpọmkwem ma gburugburu ebe nri.
Ebe a na-achọkarị bụ na enwere ọtụtụ ihe oriri dị ka nri demala na larvae.
Nsen nsen ga-ejikarị na-eme ihe n'oge awa ma ọ dịtụ iche na ijiji BSF chọrọ ụbọchị 2-4 ruo mgbe ụbụrụ na-achọpụta.
Mkpụrụ Mkpụrụ (ụdị ụmụ drosophila)
Azu Miri (sarcophagidae)
Green Flies (nke na-eme ka a mara)
Ezigbo Ọkụ (ezinụlọ dị iche iche)
Akwụsị na-efe efe (psychodidae)
Azụ Mmiri (spiriverpa lunulata)
Ibe ndị dabeere na ụlọ (musca domestica)
Mkpụrụ siji bụ ihe na-eri ndị ọrụ ugbo n'ihi na ha na-efe mkpụrụ. Azụ a dị mfe ịzụlite n'ihi na ihe oriri dị n'ụba na ihe ọkụkụ na-akwado ya maka ezigbo ihu igwe Indonesian maka ha.
N'oge mmiri ozuzo ndị a na-azụ anụ ọhịa dị ukwuu.
Egwuregwu nke Mkpụrụ Mkpụrụ
3 mm ofufe ogologo
Ụcha nke ahụ bụ odo-agba aja aja ma ọ bụ dappled
Enwere anya na-acha uhie uhie
Nwee ụra mgbe ị na-efe efe nwayọọ nwayọọ
Na-echere ise n'elu
A na-eme akwa ahụ ka ọ bụrụ ọnwa
A na-etinye akwa na ìgwè dị iche iche n'okpuru akpụkpọ ahụ ma ọ bụ na nkwarụ ma ọ bụ mkpụrụ osisi
Ọnụ ọgụgụ nsen bụ banyere 15 nke ọka
Nsen enwu ke usen iba
5 mm red ogologo
Mkpụrụ ahụ nwere ntụgharị 3
Nwanyị na-ada anya karịa
Nwa nwoke na-agbakasị
Oge ndụ na-adịru ụbọchị 16.
Na-ebi ndụ n'ime mkpụrụ n'etiti 6-9 ụbọchị
7-30 ụbọchị larvae
Ogo okenye na-ebi na izu 2-9
Nke a dị iche na nke pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ. Uji aṅụ bụ ihe na-adịghị mma, ya bụ, ihe ha na-etinye na ọnyá, unyi, ozu, ihe na-emebi emebi na ihe ndị ọzọ.
Ụdị Eji Ọkụ
Ọkụ nke anụ anụ bụ larvivara
Ogologo nke 6-14 mm na-agba ọsọ
Enwere oghere uhie isi
O nwere 3 nke gbara ọchịchịrị na-agbatị aka na dorsal thorax
Nwee isi na agba isi awọ
Nri Nri Ndụ
14-30 ụbọchị ofufe
Oge ọ bụla a na-etinyere akpa mmalite n'etiti 40-80 larvae
E nwere ọtụtụ ụdị ahụhụ na-acha akwụkwọ ndụ, n'ozuzu ọkara na nnukwu. E nwere ụcha iko, ọla edochacha, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba ntụ.
Azụ na azụ dị iche iche azụ ma ọ bụ anụ rere ure ma ọ bụ anụ ọhịa ma ọ bụ na-emebi nri.
Ogwu ugbo nwere ike iche iche, ha choro otu uzo iji tinye nje bacteria na germs n'ime nri ha na aru.
Egwuregwu nke Green Ijiji
Ogologo oge okenye okenye 1 / 4 "-1 / 12" anụ ọhịa ahụ
Nkume nke nwere iko iko, ọla ọcha, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba ntụ
3 / 4 nnukwu okenye larvae n'ime anụ ọhịa
7-12 ụbọchị larvae
Green egg àkwá ga-egbu oge 8-18
Na-ebi na anu rere ure ma ọ bụ ozu azụ, ma ọ bụ anụ ụlọ, ma ọ bụ ihe oriri. Njiji ụmụ nwanyị na-adịghị agwụ aghara bụ ndị na-akpata ụba ọnwụ nke ụmụ anụmanụ. Nri ahụ na-egbu mgbu.
Egwuregwu nke Ịgba Ọkụ
Ogologo oge nke ịnyịnya ibu ịnyịnya bụ 25mm
Anya ya na-acha akwụkwọ ndụ ma ọ bụ na-acha oji
Anya nke ụmụ nwoke jiji na-esote ibe ha
Anya nke nwanyị na-efe anya dị anya
Ndụ Ịgba Eke
Ozugbo itinye akwa dịka 100-1.000 ihe
Azụ nchara ịnyịnya ga-adị n'etiti ụbọchị 5-7
Ụzọ ndụ nke oke ejiji ejiji bụ n'etiti 30-60 ụbọchị
Ijiji ma ọ bụ mkpofu nsị ma ọ bụ ụba ijiji. Nwa ogwu na-acho ihe umu ohia dika akwa.
Àgwà nke Ọkụ
2 mm Mee ogologo
Ọchịchịrị ntụ ntụ
Ihe jupụtara na ntutu isi
Nsen ga-achọ 1-6 kwa ụbọchị
10-50 ụbọchị larvae
1-3 red day day
Enwere Ụdị Ụdị Ụdị Abụọ:
Ekuku a dị ize ndụ n'ihi na ọ na-ata anụ na ụmụ mmadụ ahụhụ nke nwere ike ịkpata ọrịa na ọrịa dị iche iche. Dị ka nnukwu ọkụ.
Ebe obibi ha dị n'ụsọ oké osimiri, oke ohia, na oke ọhịa na anụ ọhịa buffalo Nke a na-arụ ọrụ n'abalị n'etiti abalị 9-4.
Na-atụgharị Ụdị Siri
Ihe eji mara aja
A na-ehicha ahụ ya
Agba odo na agba ntụ
Enwere otu ụzọ anya ojii
Nwee ogologo ụkwụ
Mgbe obula ma obu izu ike nku na emeghe mgbe nile
A na-ekpuchi ahu na nkù na aji
Dị ka ịwụ elu
Ike ụgbọ elu nke ruru mita ise
Iji na-emepụta àkwá, ụmụ ijiji na-achọ ọbara si n'ọhịa na apị
Mgbe ịtọ n'etiti 30-50 nwa nsen
Ndị na-azụ ndị okenye bụ 10-11mm n'ogologo
Agba aja aja agba aja aja.
Achịcha na-agba ndụ na aja
Bido ruo 2 afọ
Pupa ma ọ bụ cocoon ngalaba maka 1-2 izu
Ụlọ Ụkwụ (musca domestica)
Ụdị anụ ụlọ bụ ijiji ndị kachasị anyị gburugburu ma bụrụ ndị na-arịa ọrịa. Ufodi ulo ndi nwanyi na-emekarị ka ha nwee nani otu ugbo.
Ha na-atụba àkwá na nsen 100 na ihe ndị na-emebi ihe dịka nri, anụ, ma ọ bụ feces.
Ulo nke ulo jiji
Ogologo ugbo elu nke okenye bu n'etiti 5-8 mm
Nwere 4 dị larịị
Enwere oghere akpụkpọ ụkwụ
Enwere nwa odo
Ejiri ntutu dị mma kpuchie ihu ya nke na-enye anụ ahụ aka
Inwe ihe omuma
Anya ya nwere ọtụtụ anya anya nke na-ekwe ka ọhụụ sara mbara
Azụ anụ anọ dị iche iche na-egbu egbu ma ọ bụghị ogologo (ehulata)
Magot dị ọcha
A na-eme ka ọdịdị nke ahụ dịgide ruo n'ọnụ isi
Nwee ventilator 2 azụ azụ
Nwa ogwu ahu abughi ugwo
Ogologo magot ruru 12 mm ka okenye
BSF ofufe ma ọ bụ onye agha ojii ma ọ bụ nke ndị agha ojii nwere anụ dị n'etiti 15-16 mm na nwa.
Onye agha ojii na-efegharị na ebe okpomọkụ na ebe okpomọkụ dị elu nwere ike ịmịpụta nke ọma. Ọdịdị ya na gburugburu ebe obibi nke na-etolite ọtụtụ okooko osisi, ebe ha na-eri site na ịṅụ ihe kacha mkpa nke mmanụ aṅụ na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ igirigi ụtụtụ.
A naghị ahụkarị n'ụlọ n'ihi na azụ ndị a anaghị eri. A na-ahụkwu ya na ebe nwere ọtụtụ ihe mkpofu, ihe mkpofu na ájá iji tinye nsen. N'otu oge, otu nwanyị nwere ike itinye akwa ntan 185 - 1.235 nsen.
Nhazi ọkwa sayensị
Di na nwunye: Hermetiinae
Anumanu: Hermetia illucens
Aha Binomial: Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)
Hermetia na-agba mgba na Bigot, 1879
Hermetia na-akọwa Copello, 1926
Nkọwa nke BSF Flies
Njiji BSF okenye nwere ihe dịka 16 mm (5 / 8 sentimita asatọ). Nke a na-eme ka ọ bụrụ nke nwere ụdị anụ ahụ.
Na agba sitere na nwa, acha anụnụ anụnụ na-acha akwụkwọ ndụ dị mma na obi na mgbe ụfọdụ na n'ọnụ nke afọ ọbara ọbara. Nke abụọ abdominal tergite (afo) nwere mpaghara translucent doro anya.
Na akwa isi na nnukwu anya. Nwere antenna nke okpukpu abụọ n'isi. Jiri ụkwụ na-acha ọcha 6 na tarsi whitish.
Azụ BSF dị ka akpụkpọ ahụ. Na ezumike, nku ndị a na-agbapụta na-agbada n'akụkụ afo. Onye agha na-agba ọsọ na-adịghị mma.
Ụdị BSF yiri nke ahụ
Mgbe a na-ele ya anya n'ogo, agba, na ọdịdị dị ka beps na ihe yiri ya. Karịsịa n'ihi na antenna a na-efe efe na-elongated dị ka akwa.
Tarsi azụ nke nnụnụ a na-egbuke egbuke ma nwee obere "windo" dị na nke abdominal.
Kedu ihe na-eme ka ofufe ahụ nwere "obere mmiri". Obere nku nku ojii abụghị otu azụ na azụ na-acha akwụkwọ ndụ.
Uru nke onye agha na-agba ọsọ ojii
Ihe kachasite n'aka onye agha azụ bụ ụmụ ha ma ọ bụ larvae ma ọ bụ maggot ma ọ bụ uget uget ma ọ bụ ikpuru.
E mesịa site na nkà mmụta ọgwụ, ndị uweojii, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ndị na-azụ anụ na ndị ọrụ ugbo ulo oru ugbo bu ndi nlekuta oru ugbo dika ndi oru ubi ha.
Ihe 22 kpatara nke BSF Human Friends
1. Nchebe Maka Ụmụ Mmadụ
Black Soldier Fly adịghị ize ndụ na nchekwa maka ụmụ mmadụ. Enweghị BSF na-adịghị mma dịka ijiji na-efe efe.
Okenye BSF nwere ọnụ kama enwere ike ịṅụ ya ka ọ ghara ịṅụ ọgwụ maka ụmụ mmadụ. BSF ijiji anaghị egbu ma ọ bụ na-agbaji nke na-eme ka ọ dị mma maka ụmụ mmadụ.
N'oge ndụ ya, BSF anaghị eri nri, iji nọgide na-ebi ndụ ha na-aṅụ mmanya na-acha ifuru na igirigi ụtụtụ.
Nke a bụ ihe na - eme ka BSF bụrụ nchekwa maka ụmụ mmadụ. Ọ bụ ya mere anyị na-ejighị zute BSF n'ụlọ.
BSF anaghị ebute ọrịa
Uji na-abanye ma na-abata n'ụlọ bụ ijiji na-ekpo ọkụ na ebe obibi dị ize ndụ n'ihi na ha bịara ịchọ nri ma gbasaa ọrịa ntiwapụ.
A naghị etinye ndị larvae na BSF na ụdị nke pests ma ọ bụ vectors. N'ụzọ dị iche na nke ahụ, ndị isi ojii na-efe efe na-arụ otu ọrụ dị ka ikpuru uhie.
Dị ka ndị na-emebi ihe nke mkpofu, ihe mkpofu na nri nwere ike ibibi ihe ndị na-emepụta ihe ndị dị n'ime ala ma weghachite nri na ala.
BSF Larvae bụ ihe ndị na-eme ka protein na-agbanwe agbanwe
Obere odo nke na-eto eto (BSF) bụ isi ihe nwere ike iji nweta ihe oriri nke mmiri na-eme ka ọ dị mma maka ọdịdị mmiri, nri anụmanụ, anụmanụ na nri mmadụ.
Larvae nwere ezigbo agụụ nke nwere ike iji okpukpu abụọ okpukpu abụọ nke mkpụrụ ahụ mee n'otu ụbọchị.
A na-ejikwa ya eme ihe na compost nke ụlọ, ụlọ mkpofu, ụlọ mkpofu ụlọ ahịa.
Tinyere inine na mkpụrụ osisi, ihe mkpofu ugbo na umu anu ulo tinyere umu anu ulo na umu mmadu.
2. Ọnụ BSF "Ọ Zụghị Okè"
N'adịghị ka ejiji ụlọ, BSF nwere akụkụ nke "ezughị okè" nke ọnụ na-adịghị eri ma nwee ike iri mmiri dị ka nectar ifuru ma ọ bụ mmiri igirigi.
N'ihi na ọ naghị eri BSF anaghị agbụ nri tinyere nsị enzymes dịka nkwụ ndị ọzọ, ya mere ọ dịghị agbasa ọrịa.
Ndị agha ojii na-adịghị achọ mmasị ịbata n'ụlọ ma ọ bụ nri mmadụ. Dị ka detritivores na coprovores, ụmụ nwanyị jiji na-ebu nsen nwere mmasị karịa nri ma ọ bụ fatịlaịza.
Nwa obere agha anaghị efe efe dị ka mbọ ndị ọzọ. Egwuregwu ojii na-enweghị ike n'ihi ike ha nwere ike iri nri dị ka ndị okenye.
A na-ejide ngwa ngwa ịchọta onye agha ojii na-ebugharị mgbe ha banyere n'ụlọ, n'ihi na ha anaghị ezere mgbe ejidere ha.
Egwuregwu ojii na-adịghị ọcha (dị ọcha) ma ọ bụghị aru ma ọ bụ ịcha. Nanị ihe mgbachitere ahụ megide ndị na-eri anụ bụ ikiri ma zoo.
Iji belata onu ogugu ndi agha agha nwere ike ime site na igbanye red tupu ha ejide ogwu.
Ụzọ ọzọ bụ ịfri mmiri, nkụ, na-azụ anụ ụlọ, na-etinyekwa ihe ndị dị na ọkụkọ coops maka nri nri, ma ọ bụ na-eri nnụnụ ọhịa.
4. Sakti BSF ada
Ụda nke BSF mepụtara nwere ike ịghapụkwa ụdị ahụhụ ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ijiji na bsf ikpuru na mpaghara mgbe ahụ, a gaghị enwe ijiji na ụzụ ndị ọzọ na-agba ọsọ.
5. Ngwakọta Ngwá Agha Organic
Otu ụbọchị, BSF eric nwere ike iri okpukpu abụọ dị ka ihe ọkụkụ, ihe mkpofu ma ọ bụ anụmanụ.
Nke a pụtara na ọ bụrụ na anyị nwere kilogram 100 nke bsf magot, mgbe ahụ, 200 Kg nke ahịhịa ga-apụ kwa ụbọchị. Ugbo nke nwere ike iwepu bu ahihia umu ahihia nile, ahihia, anu ulo, na umu mmadu.
Ihe Nlereanya nke Maggot Feed Organic Waste
Ahịa ahịa (akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi)
Ụlọ ọgwụ n'efu
Ihe Nlereanya nke Maggot Feed Waste
Ntu ọka mmanu
Mmanụ aṅụ mmanụ
Ihe atụ nke Maggot Feed Animation Litter
Anụ nri ọkụkọ
Nri anu ohia
Oke oke oke bekee nri
Anụ anụ ehi
Anụ nri anụ
6. Dị ọcha na-enweghị isi
Dị ka nsị anụ ụlọ n'ozuzu ga-eme ka ísìsì. N'adịghị ka unyi nke bsf na-ewepụta adịghị eme ka isi ísì.
Maggot droppings bụ obere mkpọsa dịka ájá ma ọ bụ oke nke ntụ ntụ.
7. Nwere ike ịdị ndụ na oge oke
A maara BSf larvae na ọ dị nnọọ isi ike ma nwee ike ịdị ndụ na ngwụsị ph. Dị ka awa abụọ na anọ nke mmanya dị ọcha, nnu, acid na amonia.
Na oyi na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị nri BSF maggot ga-ezumike, bụrụ ụra ma hie ụra wee maliteghachi mgbe ikuku ikuku na-alaghachi na nkịtị.
8. Ọgaranya na Nri na Protein Kasị Elu
BSF nwere ma ọ bụ 40-56% protein protein, 30-36% wepụ ether, 15-16% ash, 4.9-5.2% calcium, na 0.61-0.64% phosphorus na ụdị ọkụ.
BSf larva nwere ọgaranya na nri, zuru oke na amino acid na elu na protein ya mere ọ dị mma inye dị ka nri ụmụ anụmanụ.
Ihe Nlereanya nke Achịcha Achịcha anụ
Ụdị azụ niile
Ụdị ọkụkọ niile
Ụdị nnụnụ niile
Ụdị ọbọ dị iche iche
Ụdị ọbọ ọ bụla
Dragọn ahụ agbagwoju anya
9. Nchịkwa Na-achịkwa BSF Population
Ogologo afọ BSF bụ nanị 5-8 n'ụbọchị ma nwee ike iru 14 kwa ụbọchị. N'ime oge ndụ nke ijiji nke taa ha na-amịpụta site na mating ma ọ bụ mating.
Mgbe ịlụ nwanyị ma ọ bụ ịlụ nwoke nwoke nwoke na-agba ọsọ na-aga n'ime oge awa ọ ga-anwụ. Ọ bụ ezie na ndị agha na-agba ọsọ ojii ga-anwụ mgbe ha tinyechara àkwá ha.
10. Ọganihu Larval Ngwa Ngwa
Site n'inye nri n'ụdị ihe mkpofu, cohes ma ọ bụ mkpocha, ntakịrị obere ogbe ndị na-erube isi ruo oge nke okenye na-agbapụta gburugburu 18 kwa ụbọchị.
N'etiti oge ahụ n'izu nke abụọ ahụ nnukwu ahụ nke ahụ na-etolite etolite 15.000 n'ogo.
Ogo a na-ebuwanye ibu nke larvae na-eweta uru maka ndị na-azụlite anụ, nke a ga-egbute ma nye anụ ụlọ naanị izu abụọ.
Ọtụtụ ndị na-azụ atụrụ na-enye ndị na-eme ka ha nwee afọ abụọ n'izu abụọ n'ihi na ụdị akụkụ ndị a abụghị ihe siri ike, azụ, anụ ọkụkọ na anụ ugbo.
11. Ọtụtụ Egg na-emepụta
Nwa BSF nwere ike ịtọ akwa n'etiti 185 - 1.230 nsen. A na-etinye nsen ndị a n'ụzọ na-enweghị isi n'elu nri ma ọ bụ ihe mkpofu ma n'elu nri.
Ọnụ ọgụgụ nke àkwá dị nhata nke onye toro eto BSF. Nwanyị BSF nke nwere oke buru ibu na oke ufe nwere ntụgharị dị elu maka àkwá iji tụnyere ijiji nwere obere ahụ na nku.
Mgbe ụbọchị abụọ ruo ụbọchị anọ, àkwá ndị ahụ ga-abanye na 1 instar magot ma too ka ha mee ka 6 dị n'agbata izu abụọ ma ọ bụ izu atọ.
Na ọnọdụ ebe enwere nri zuru oke na ikuku dị elu n'etiti 25-35 Celsius C. Ndị ọhụrụ potish potato ahụ bụ ihe dịka 2 mm, ma na-etolite na 5 mm. na mgbe ọ gbanwere akpụkpọ ahụ ọ na-etolite na 1,5-2 cm.
Maggot BSF nwere ike iri ihe ọ bụla ụmụ mmadụ na-eri ma nwee ike ịkwụsị ihe mkpofu, ihe mkpofu na nri ngwa ngwa.
Mgbanwe a na-eme Maggot BSF nke ọtụtụ ndị nọ n'ụwa. Ihe ọzọ dị mma bụ isi iyi nke nri na mgbasa ozi dịnụ n'ụba na gburugburu ebe obibi anyị, a pụkwara inweta ya n'efu.
Ọ dị mfe inweta ndị na-azụlite ndị na-azụlite ya na-akwụ ụgwọ dị ala.
13. Enweghị Mkpa Maka Ala N'uba.
Ịmepụta ikpuru karịsịa ikpuru dị ka azụ azụ na anụ ọkụkọ anaghị achọ ala sara mbara. Anyị nwere ike iji ụlọ ọrụ na-adọba ụgbọala, n'akụkụ na azụ ụlọ ahụ nke nwere mita 3x4 mbụ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị maraworị na ọganihu BSF maggot n'oge a, ị nwere ike ịzụlite ya n'ụlọ dịka enyi Yurie BSF n'obodo Kebumen.
A na-eji ndị ọrụ ugbo azụ, anụ ọkụkọ na bsf anụ ndị na-eri anụ dị ka nri anụ, ma na-emekarị ka ha ghọọ ihe oriri.
Ihe nyocha nke edozi Maggot
14. Ọ dị mfe ma dị irè
Iji mepụta BSF ma ọ bụ dị mfe, iji nweta ihe mkpofu ma ọ bụ ihe mkpofu n'ime akpa na-etinye ya na mpaghara anaghị ekpuchi mmiri ozuzo.
N'ime ụbọchị ole na ole BSF nwere ike iwepụta ma nye anụ ụlọ. Usoro nke pane ahụ dị irè.
Ebe ọ bụ na BSF magot dị ka okenye ga-ahapụrịrị mgbasa ozi mkpofu ka ha gaa ebe gbara ọchịchịrị na akọrọ (nchịkọta onwe onye) iji tụgharịa uche ma gbanwee n'oge red tupu tupu emesị ghọọ onye toro eto BSF.
15. Ngwurugwu Protein Reebu
Ọhụụ zuru oke nke ikpuru bụ isi iyi nke protein nwere ike iweghachite ngwa ngwa.
Imepụta maggot ma ọ bụ igbo na-emepụta ihe na-emepụta protein ndị nwere ike imegharị bụ nke sitere na usoro mmepụta nke ọkụ.
Nke a pụtara na BSF BSF na ijiji Maggot dị na okike ruo oge dị ogologo nke mere na ọ dịghị mkpa inwe mgbagwoju anya na ichegbu onwe gị banyere ịhapụ ihe onwunwe.
Ọ bụ ya mere ndị ọrụ ugbo na-anụ ọkụ n'obi na-emepụta ihe dị ka protein maka azụ ha na ọkụkọ.
16. Elu Kalori
Maggot nwere calorie dị elu ma ọ bụ isi iyi nke ume na mgbe anụ ụlọ na-eri ka azụ ma ọ bụ anụ ọkụkọ na-eto ngwa ngwa.
N'ihi ọrụ calories na-akwado site na BSF maggot. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, calorie bụ ike nke anụ, ọkụkọ na ihe ndị na-akpụ akpụ na ụmụ mmadụ chọrọ.
Iji nwee ike ịkwaga ma rụọ ọrụ ahụ nke ọma ka ahụ wee nwee ezigbo nguzogide mwakpo ọrịa.
Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mkpa ka calorie dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu azụ dị ka 9,2 - 10,1% abụba iji gboo mkpa ndị a site na BSF maggot.
Maggot nke nwere ọdịnaya 29,65 (Fahmi na el, 2007). Ma mgbe a na-ele ya anya site n'oge ọgbọ, oke nkịta nwere ihe dị iche iche na-edozi ahụ.
Ihe Nzuzo Day (BK) Protein Coarse (PK) Anwụrụ Anwụrụ Na-agba Ọhịa
Lelee nke mbụ
Ịhụ uru abụba dị na oke dị elu karịa mkpa nke azụ (maka anụ ụlọ ndị ọzọ biko chọpụta ka ọ ghara ịba ụba na nri).
Mgbe ahụ, ọ ka mma ma ọ bụrụ na a na-eji BSF maggot dị ka onyinye, ntụ ọka, ihe ndị na-adịghị ọcha na ihe ndị ọzọ.
Na-edozi ikpuru ndị a dị iche iche na mgbakwunye na ịzere ihe oriri ndị na-abaghị uru ma nwee ike inwe mmetụta ọjọọ na anụ ụlọ. Ọ bụkwa ihe mkpofu.
17. Inwe Ohere Onu ahia
A na-emepụta ihe oriri anụ ọhịa site n'afọ ruo n'afọ ka 6,2% -8,1% na 2018 anụ ngwaahịa mmepụta anụ na-emechi na 19,4 nde tọn nri.
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nri anụ ọhịa na-eme ka mkpopụta mmepụta nnukwu ohere.
Ihe ndị na-azụ anụ ọhịa bụ maka na ha dị oke ala na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu, ọbụna n'ụdị njem, ha dịkwa ntakịrị.
E jiri ya tụnyere nri ụmụ anụmanụ, ihe ndị dị na ya na-ebubata ntụ ọka azu na ụgwọ dị elu maka ịbịpụta ihe ndị a.
Ịmụta na-enweghị ụta
Site n'akụkụ dị iche iche, ndị ọrụ ugbo nwere ike imeri, ma ọ bụ iji nye nri anụ ọhịa ma dị mma, ha kwesịrị ịmụta otú e si azụlite ikpuru kwesịrị ekwesị ka o wee mepụta ọtụtụ magot.
Ọ dịkwa mkpa ka a ghọta ya site ná mmalite, malite na ịkụ nke ikpuru na-enweghị ísì. Ka azụmahịa gị na Maggot bụrụ ihe nchekwa ma dị jụụ ka ndị obodo ghara ịme gị.
Maka mmalite, anyị nwere ike itinye ohere ndị a na obere ma ọ bụ n'ụlọ.
Enwekwu ihe ọmụma na ahụmahụ na-eme ka anyị nwee obi ike maka ọganihu azụmaahịa ka ukwuu.
18. Ọnọdụ ihu igwe Indonesian dị mma
Hot ihu igwe na
Site na ebe okpomọkụ dị na Indonesia, BSF (onye agha ojii na-efe efe) nwere ike ịdị ndụ ma mụọ ya nke ọma.
Ihe nke ebe okpomọkụ a bụ na ọ na - eme ka usoro niile nke Magfot BSF nke oge a ghara ịnwụ:
Ịzụlite oge BSF Maggot n'oge na-enweghị isi nke dị ọnụ ala
Modern BSF maggot na-akọ ihe na-enweghị isi ísì
Nchịkọta nke BSF Maggot n'oge a abụghị ihe bara uru
Oge a bsf maggot na-emepụta na-enweghị isi nke ngwa ngwa
Na-azụlite Ndị Ọhịa na-enweghị Ọnụ Ọhịa Dị Mma
Ebe okpomọkụ na ebe okpomọkụ na Indonesia na enyere ndị ọrụ ugbo aka ime ka ụkọ ọrụ na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ nwere nanị oge abụọ. Iji mee ka bSF ọ bụrụ na ọ na-ewe ọtụtụ narị nde ego, ọ na-ejide ọkpụkpụ na ọkụ niile nke mere ka okpomọkụ dị n'ọdụ ahụ dịgide.
Ọ bụ ezie na na Indonesia ọ dịghị mkpa n'ihi na ihu igwe na Indonesia na-adịwanye jụụ. Ya mere iji mee ka ọ bụrụ na i jiri 11-2 mee ihe, ọ dịghị mkpa ka ị jiri ọtụtụ narị nde ego.
N'Indonesia iji mee ka ego BSF zuo oke ego Rp500.000-Rp600.000.
Nri Ugbo Ogwu Na-adighi Eke
Iji mepụta ikpuru, otu n'ime ihe ndị a ga-akwadebe bụ ihe okike dị ka ihe nkenke maka ime ka ikpuru.
Dịka nsị anụ, ihe mkpofu, anụ ụlọ, wdg. Ihe ndi ozo di iche iche di mfe. Ọ dị mfe ịnweta ihe ndị bụ isi iji mee ka Maggot gbakwunyere uru iji malite azụmahịa dị mfe.
Ihe ndị a dị ugbu a na gburugburu anyị. Naanị leba anya na ikpo ahịhịa na ahịa, n'okporo ụzọ na na nkwụsị.
Achọghị ịkọwa ihe na-adịghị ọcha, mmanụ nkwụ nke onye nwe ya kwụsịrị. Tinyere ihe mkpofu umu anumanu nke gbasasiri ma na-agbagha gburugburu ebe obibi.
Site n'wepụta ihe akuru, na-eme ka ime mkpọtụ dị mfe iji mezuo ya.
More Cultivation nke Odighi Ajuju
Ọnụ ala nke ego mbụ na nkwụsị nke inweta ihe ọkụkụ na-eme ka azụ ahịa baa uru.
Maka naanị obere obere ego nwere ike ịmalite na nnweta ngwaọrụ ndị dị mfe ịme nwere ike ime ka mmepụta ihe na ịme ahịa na-abawanye uru.
Oru Odorless Maggot Cultivation The Result
Ulo nke oke BSF na climatic tropical bụ nnọọ ngwa ngwa tụnyere mba ndị na-abụghị nke okpomọkụ.
Enwere ike inweta Maggot BSf na ebe okpomọkụ nke okpomọkụ na 18 naanị otu ụbọchị. A pụkwara ịkụkwa ikpuru BSF mgbe ha dị otu izu.
Oge dị mkpirikpi n'iwepụta oke na mbara igwe dị ezigbo mkpa maka ndị ọrụ ugbo na-enye nri na ngwa ngwa.
Ya mere achicha anụ ahụ chọrọ ka ọ dịkwuo.
19. Ike na-ebu ebe niile
Iji mepụta eriri, e nwere ọtụtụ ngwá na ngwa ndị a ga-enye dịka BSF drum, BSF egg container, egg egg, biotong maggot enlargement etc.
Ime ka BSF ghara ịṅụ ihe ọhụrụ, Ị nwere ike mee ka BSF drum si na ihe mkpofu ma ọ bụ ihe eji eme ihe dịka eji osisi, ihe nchara na achara n'ụlọ.
A na-eme ka ebe obibi BSF dị ka ebe a na-azụlite ijiji ka ha wee ghara ife ebe niile. Site n'inye BSF ụda, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa ka a gbanwee egg egg.
Ihe ndozi maka BSF nsen nwere ike iji efere, bọket, eji galọn, egwu, wdg. A na-agbazi àkwá àkwá ndị a na-ewe ma ọ bụ na-aghọrọ ha site na BSf ugbo n'ime ihe ndị a.
Kedu nke a na-emezi n'usoro iji mee ka ọ dịkwuo dị ka atụmanya nke ndị na-eri anụ.
Enwere ike ịme BSF egg racks dịka osisi, achara na ihe mkpofu ndị ọzọ. Biotong dị ka akpa maka ịbawanye nke ikpuru n'ime usoro ahụ mgbe àkwá tụghachite ma bufee ya na nchịkọta biotong.
Enwere ike ịme biotong site na ngwakọ ngwongwo dịka ịme ụrọ. Debe ihe dị ka 3 gaa na 4 stacking.
N'ụzọ dị otú a, nsị nke ikpuru nwere ike iweli ala dị warara na ụgbọala ma ọ bụ n'èzí nke ụlọ ụlọ.
A pụkwara iji ihe nkedo mee ihe na snoo na-eme ka ọdọ mmiri ma ọ bụ ihe dịka 30 cm n'ịdị elu.
20. BSF ndị na-agba chaa chaa na nsen site na okike
BSF ijiji zuru ebe nile na Indonesia. Ụzọ iji nye ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ nke kichin n'ime akpa ahụ, ndị BSF ga-abata ma debe nsen n'ime ihe ndị ahụ e nyere.
E wezụga ihe ndị ọzọ nke kichin, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ a pụrụ iji rụọ ọrụ ma ọ bụrụhaala na a na-etinye ihe ndị na-emepụta ahụ na mpaghara ndị dị ndụ ma ghara ịdị na-egbu egbu ma ọ bụ nwee ọgwụ pesticides.
21. Green na Environmentally friendly Fly Repellent
BSF nwere ikikere na-agbapụta ụda olu na ijiji. Ya mere na na mgbasa ozi mgbasa ozi anyị kwadebere na ọ gaghị ejikọta ma jikọta ya na ijiji na ijiji.
Nke a dị ezigbo mkpa ka ala ịta ahịhịa anyị ghara ịdị ize ndụ site na iji ebu. Enweghị isi, nchekwa ma dị mma maka ndị na-azụlite ma ọ bụ gburugburu ebe obibi.
22. Maggot BSF bụ enyi nke ndị ọrụ ugbo ọkụkọ
Maggot nwa agha agha nwere ike belata ikikere E. coli 0157: H7 na Salmonella enterica dị na anụ ọkụkọ.
Maggot onye agha na-agba ọsọ ngwa ngwa na-egbu ndị na-emetọ ya, mmiri ọgwụ ndị mejupụtara itoolu sitere na adịghị ọcha na 24 awa.
Onye agha na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na-ebelata oke na ibu nke ihe efu. Site na otutu obodo ha na-akwatu ihe oriri ma na-eme ka okpomoku, na-eme ka evaporation nke compost di elu.
A na-atụgharịkwa ego dị oké ọnụ ahịa na carbon dioxide nke nkịta na akararịrị na-ejikọta.
Larvae na compost usoro na-emekarị belata akwụkwọ compost banyere 50%. Ọ pụkwara iru 90% na BSF oge a na-enweghị usoro ịkụ mkpụrụ nke Bau na Yurie BSF.
Nkesa BSF ijiji
Nke a sitere na neotropical ecotone, ma n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ gbasaa na mpaghara nile nke ụwa, na-aghọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile.
BSF nọ na ọtụtụ Europe, gụnyere Iberia Peninsula, Southern France, Italy, Croatia, Malta, Canary Islands na Switzerland.
A pụkwara ịchọta BSF na Afrotropic ekozon, ekozon Australasia, Eastern Palaearctic ecozon, Nearctic ecozon, North Africa, na Ekozon Indomalayan.
BSF ndụ ndụ
Ụmụ nwanyị na-azụ ụmụ nwanyị na-atụba akwa n'etiti 185-1.235 nsen ozugbo. A na-echekwa àkwá ndị a na mgbaba ma ọ bụ n'elu n'elu ma ọ bụ n'akụkụ ihe ndị dị ka nri ma ọ bụ compost na hatching n'ihe gbasara 2-4 ụbọchị.
Ngwurugwu ohuru ọhụrụ ahụ bụ 0,04 sentimita (1 mm) n'ogologo, nwee ike iru 1 sentimita (27 mm) ogologo na 0,10 gaa na 0,22 g na njedebe nke ọkpụkpụ.
Ogologo oge a na-agba gburugburu 18-22 ụbọchị, ebe nkedo prepupa dị n'oge 7 ụbọchị. Ogologo oge mgbochi ahụ nwere ike igbu oge ma gbasaa n'ime ọnwa ole na ole na obere okpomọkụ ma ọ bụ enweghị nri.
Okpokoro ugbochi sitere na 1 ruo izu 2. Oke nwere ike biri n'etiti 5 - 8 ụbọchị mgbe e nyere mmanụ aṅụ ma ọ bụ shuga java mgbe a dọtara ha n'agha ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ha kacha amasị ha na anụ ọhịa.
Ndị na-azụkarị ogo ndị okenye na-eji abụba na-anakọtara n'oge ọkpụkpụ.
BSF ofufe nwere ntụpọ zuru oke na imezi ndụ ya. Ezigbo metamorphosis bụ ndụ ndụ ma ọ bụ ndụ nke ụmụ anụmanụ na-enweta oge nke 4 na ndụ ha.
Na otu ndụ BSF na-ewe n'etiti ụbọchị 40-44. Oge a na-adabere n'ihe ndị dị ka okpomọkụ nke nlekọta na nri.
BSF ofufe dị iche iche n'ihi na n'oge ndụ ya, e nwere ihe ndị ọzọ, gụnyere usoro 5 dị ka ndị a:
BSF ijiji oge
Nke a na-achọpụta
Oge nke ogo ma ọ bụ imago bụ nke na-eto eto bụ ọkpụkpụ mgbe usoro red na-apụ na ya. N'okpuru ebe a, BSF na-ejighị azụ na-eri ma na-aṅụ ihe ọṅụṅụ n'oge ndụ ha niile.
Ndị na-eto eto BSF bụ ndị na-akpachapụta ma na-esi n'èzí ha pụta ma ọ bụ nanị n'ime oge 12 ga-eji nwayọọ nwayọọ na-eto eto.
Azụ ọhụrụ ahụ ga-esi n'ọbọ akwọ na-agafe ma na-agagharị iji chọpụta isi iyi anyanwụ na ịṅụ.
Afọ nke bsf okenye ofufe dị mkpụmkpụ, nke dị n'etiti 5-8 ụbọchị, nke a na-emetụta site na ọnọdụ nke ihu igwe, iru mmiri na iyi nke ọṅụṅụ.
Mgbe onye toro eto BSF na-eto eto ma ọ bụ di na nwunye. Njiji BSF nwere ikikere iji rụọ ọrụ nke ọma na naanị n'oge dị mkpirikpi.
BSF ihe ọṅụṅụ na-amasịkarị
Ihe ọṅụṅụ kachasị mma nke BSF bụ igirigi ụtụtụ na osisi mmanụ aṅụ na-ewepu. N'ime ụlọ mkpọrọ anyị nwere ike inye sugar sugar dị ka ihe nnọchiteanya maka mmanụ aṅụ.
Ị na-eme nke a site na ịpị mmiri mmiri n'ime ebe niile.
Na usoro nke ịlụ ma ọ bụ nkata nne na nna ga-abịakwute nwanyị. Na usoro nke ịbịakwute ụmụ nwanyị BSF nwanyi na-agbanwegharị na ọkwa ụfọdụ ma na-adịru nwa oge.
Ọnọdụ nke nwoke nwoke na-efe efe ma na-agagharị na ahụ nke nwanyi, ha na-eche ihu n'otu ntụziaka ahụ, ma na sekọnd ole na ole ka ha na-agagharị ma na-emegide ibe ha.
Na nke a nke ikuku ọkụ na-aghọ ihe na-arụ ọrụ dị mkpa bụ okpomọkụ. Ọnọdụ kacha mma maka BSF ijiji bụ na okpomọkụ nke 30 Celsius C.
Ọ bụ ezie na BSF adịghị mkpa nri n'oge ndụ ya, a ghaghị inye ya mmanya. Ọgwụgwọ site n'ịṅụ mmiri n'ụdị mmanụ aṅụ na ijiji ga-amụba mmepụta anụ.
Ịnye mmanụ aṅụ ma ọ bụ mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri Javanese na-enye mmetụta nke ịbawanye afọ nke ijiji.
A pụkwara ịhụ ya na ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị mgbapụ nke ndụ na ọtụtụ ụbọchị ịtọba nsen maka ijiji.
Ọnụ ọgụgụ nke oge mgbatị nke afọ
Ụbọchị 10-11 bụ ụbọchị kachasị elu nke BSF ọnwụ nyere mmanụ aṅụ
Ụbọchị 5-8 bụ ụbọchị kachasị elu nke ọnwụ BSF nyere mmiri ọṅụṅụ
Ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị maka ịtọ fly nsen
Ụbọchị 5 bụ ụbọchị kacha elu nke ịtọba nsen na ijiji nke e nyere mmanụ aṅụ
Ụbọchị 7 bụ ụbọchị kacha elu nke ịtọba nsen na ijiji na-enye mmiri ọṅụṅụ
Oge n'etiti 10-30 nkeji bụ nwanyị BSF iji tinye nsen. Na ọnụ ọgụgụ dị n'etiti ihe 546-1.505.
Akara BSF dị n'etiti 16,2-18,9 mg na arọ kwa àkwá n'etiti 0,027-0,032 mg. Oge kachasị elu na-etinyekarị àkwá n'etiti 11.00-15.00.
Njiji BSF ndị nwanyị dina nsen naanị otu ugboro, ma nwụọ ọtụtụ awa mgbe e mesịrị.
More BSF Nwanyi Nwanyi
Nnukwu azụ nke BSF buru ibu na-emekarị nsen ma e jiri ya tụnyere ụmụ ijiji nke dị ntakịrị.
Ike ikuku nke BSF na-adaba na iru mmiri n'etiti 55-60%.
Ogogwoju okenye ga-abụ onye ọlụlụ na oviposition na 24 Celsius C (75 Celsius F) na 40 Celsius C (104 Celsius) ma ọ bụ karịa. Banyere 99,6% oviposition n'ọhịa na-eme na 27,5-37,5 ° C (81,5-99,5 ° F).
A na-eji oriọna dị na Quartz-iodine mee ihe n'ụzọ gara nke ọma iji mee ka nsị nke ndị toworo eto too. Na ọnọdụ ebe okpomọkụ, ìhè anyanwụ kpọmkwem na ụtụtụ na n'ehihie ga-akpali BSF ka ọ bụrụ di na nwunye ma dina nsen.
Ebe ọ bụ na ìhè anyanwụ na-apụtaghị ìhè BSF kachasị mma tupu mgbe ọ nwụsịrị.
Ezigbo iru mmiri
A na-ewere ihu mmiri na 70% dị oke mma maka akụkụ ọ bụla nke usoro ndụ ya. O doro anya na mkpụrụ ahụ adịghị mkpa maka cocoons, ma a na-ewere mkpụrụ ahụ dị ka onye na-achịkwa mmiri nke na-egbochi ihicha.
93% ọkwa nke ofufe na-ama mgbe mmiri na-echekwa na 70%.
Umu mmadu nwere ike ikpochapu umu mmadu. Larvae na-arụsi ọrụ ike na-agbanwe agbanwe protein, nke nwere protein 56, nke bara ọgaranya na calcium na amino acids zuru ezu.
Na 432 awa, 1 nke ụsụụ ndị agha ojii na-agbanwe na 2,4 n'arọ nke protein, nke pụtara ihe karịrị ntanye 45.000 na nsen 1 g. Ya mere, ha nwere ike ịbụ isi iyi nke protein maka oriri mmadụ.
Ha enweghi protein, ma na-agbanwe protein ndị mmadụ na-adịghị eri na-aghọ nri oriri.
Ụdị njirimara na-esi ísì ụtọ dị ka esi esi nri.
A na-ewere ya na ọ bụ na 2 - 4 ụbọchị. Esemokwu dị iche iche nke na-eme na-akpata site na okpomọkụ na iru mmiri gburugburu gburugburu akwa.
Ọtụtụ mgbe, ụmụ nwanyị BSF jiji na-etinye nsen ha na ebe dị egwu ma jiri ọtụtụ ihe ndị dị ndụ dị ka ọdịdị nke ịhụnanya maka ụmụ ha mgbe ha na-emecha nwatakịrị ha adịghị "ogbenye" ​​na agụụ.
Ihe atụ nke ebe ndị BSF na-etinye nkwụ BSF
Egwu nwere ike
Akwụkwọ anụ ọhịa
Ebe mkpofu mmiri
N'elu akwa, nwanyị BSF ga-emepụta ọtụtụ nsen dị ka ntanaka 185 - 1.235 ma ọ bụ na-akpọkarị ụyọkọ.
Ụdị nke BSF egg bụ oval nwere ogologo banyere 0,7mm, mgbe nne na nna na-ebido ya, nsen ndị a dị ọcha.
Ma jiri nwayọọ nwayọọ na agba megharịrị edo edo. Iji mara ọdịiche dị na àkwá ndị ahụ ma ọ bụ na ọ bụghị, usoro ahụ bụ ịlele ma ọ bụ hụ BSF nsen.
Ọ bụrụ na agba na-agbanwe na obere ọbara ọbara (oroma) na ọdịdị nke ndokwa edozi adịghịzi mma ma ọ bụ na-adịghị mma.
Ya mere, anyị nwere ike ijide n'aka na àkwá ahụ adịrị ma ghọọ nsị ma ọ bụ ikpuru ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ ma ọ bụ uget-uget.
Media maka incubating BSF nsen nwere ike ịbụ ihe ọ bụla organic ihe onwunwe dị ka mkpofu, n'efu na nri.
A na-ejikarị larvae BSF mee compost ma ọ bụ tọghata ahihia n'ime nri ụmụ anụmanụ. A na-ewepụta ihe ndị a kụrụ n'ubi dị ka anụ ọkụkọ, azụ, ezì, agụba, nduru, dragọn bearded na ọbụna nkịta.
BSF larvae bụ otu n'ime anụ ndị kachasị mma na ịgbanye nri n'ime biomass. Na mgbakwunye na mmepụta protein, nku ogwu na-emepụta ihe ndị ọzọ bara uru a na-akpọ frass (kasgot / used maggot).
Kasgot bụ ọka na-enweghị ntụpọ nke a pụrụ iji dịka organic fatịlaịza. BSF larvae tupu ịbanye na nwata (prepupa) site na nkwụsị isii.
(Mkparịta ụka nke a na-eme ka ọ dị mfe na mpaghara atọ iji nyere aka kwado nghọta na ịdị jụụ na omume gị).
Ebee ka akụkụ ahụ dị na prepupa na-adịghịzi eri nri, ma na-eme ka ọdịnaya afọ ha ghara ịdị, akụkụ ọnụ ha ga-abanye nko ndị a na-eji arịgo.
Oge nke mbụ
Oge nke abụọ na nke otu
Mepee oge m
Na nke a mbụ obere obere larvae ga-arụsi ọrụ ike n'ebe isi nri. Akụkụ nke mbụ a nke larvae chọrọ oke nri dị ukwuu dịka ihe mpempe akwụkwọ maka usoro mmepe ya.
Mgbe oge 1 - 2 gasịrị, a ga-ewepụ akụkụ nke mbụ ahụ site na akpụkpọ ahụ wee banye mpaghara nke abụọ.
Mee usoro nke II
Na oge nke abụọ, larvae ugbu a nwere ibu buru ibu nke dị gburugburu 4-5mm, nke nwere àgwà ndị ahụ dị ka akụkụ nke mbụ ma o nwere ọnụ nke buru ibu karịa oge mbụ.
Achọpụtara na akụkụ nke oghere ihu nke nwere obere ntụ. Na ịgaghachi na-aghọghachi oge nke atọ nke ga-abụ nke a na-ahụ anya.
Mezie usoro III
Na oge nke atọ, ọdịda dị n'agbata 15mm ma ọ bụ karịa dabere na ndepụta a nyere (dị).
Oge nke atọ nke larvae ugbua enweela mkpiri ma na-arụsi ọrụ ike ịchọta ebe a na-ehicha ma na-echebe ya site na mmiri ozuzo na kpọmkwem ìhè anyanwụ na-eme ka ọ ghọọ red ma ọ bụ cocoon.
Ihe omimi nke mbughari nke a na-eji eme ihe na-eme ka onye na-eme ihe ubi na-ewepu onwe ya na prepupa n'onwe ya.
Usoro owuwe ihe eji akpaaka site n'inye igbe nwere mmiri nke nwere okporo ụzọ ma ọ bụ na ọ nwere ike inye ọkwa nke na-eme ka prepupa bilie site na biotong wee daba na mpaghara nchịkọta.
Ogwu kachasị mma maka ngwa ngwa na-eto ngwa ngwa bụ 30 Celsius C.
Maggot na-agba ọsọ nke onye agha ojii dị ike ma nwee ike iguzogide ọnọdụ acidic na elu dị elu karịa ikpuru. Ndị na-eto eto ojii nwere ike ịnwụ n'oge oyi.
Na onye agha ojii na-efe efe ga-agbapụ ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ dị oke oke, ma ihe ọkụkụ na-eme ka ọkụ dị na ahịhịa ma ọ bụ compost piles.
Na mpaghara prepupa, larvae nwere anụ ahụ zuru ezu na-eto eto n'ime anụ ahụ tozuru oke.
N'oge a, ọ na-adịgide n'oge 7 ụbọchị mana okpomọkụ na mpaghara ọ bụla na-emetụta ya. Ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 26-33 Celsius C.
Na mpaghara prepupa, larvae nke ahụ na-acha odo odo. Agba na-agbanwe n'ime ogwu dị ka ihe ịrịba ama nke larvae bụ ndị tozuru okè ma dị njikere ịghọ red ma ọ bụ cocoon.
Ntu nwanyi BSF di na uto ha di na ntan ma o bu ihe di ogologo karia nwoke.
Ebu ibu maka Nwanyi Larvae
Nwunye ndị nwanyi na-atụkwa ụba karị ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwoke. Na mpaghara prepupa, nwaaji prepupa na-ahụkarị mgbasa ozi.
Chọọ ebe ebe ndagwurugwu na-echebe site na ìhè anyanwụ na mmiri ozuzo.
A na-enwe ike ịchọta dialam ahụ dị na ikpo nke epupụta, tiye ikpo, ikpo nke anụ anụmanụ, nsị mmanụ nkwụ na ihe ndị ọzọ.
A na-eme nke a iji zere ndị na-eri anụ dịka ọkụkọ, azụ, nnụnụ, ọbọgwụ, nkịta, ụmụ oke na ihe ndị ọzọ.
N'ihi na ụmụ anụmanụ ndị a (onye na-eri anụ) na-atụgharị dị ka anụ ehi nke na-atọ ụtọ ma dị elu na protein. A na-akpọkarị nkwadebe a kwa ụbọchị site na obodo a dị ka osisi ma ọ bụ brood.
Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịbịpụta ihe site na okike. Ihe ọzọ bụ ịzụta si n'aka ndị ọrụ ubi.
Ekebeghi ihe di nma bu otu
Maggot bụ anụ ọhịa, nke pụtara iri ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ dị n'ụdị anụ ahụ.
Inye ihe oriri ma ọ bụ na-eri nri na mkpịsị ụkwụ ebe ọ na-eto eto dị ka prepupa na-emetụta àgwà nke prepupa.
Ọzọkwa, a ga-eji nkwadebe ndị ahụ mee ihe maka nzube nke ịbụ ndị na-azụ anụ ka a zụlite ha ọzọ.
Ọ bụrụ na ndepụta a nyere bụ naanị n'ụdị ahịhịa ma ọ bụ anụ ụlọ ma ọ bụ bran, n'ezie ụdị prepupa ga-abụ nke dị ala dị ka ihe ntanye.
Ụdị prepupa a dị mma ma ọ bụrụ na ejiri ya dị ka ikpuru na-etinye ihe onwunwe. Ọ bụghị maka ụta nke a ga-eji mee ihe maka ịghagharị.
Inye nri na-enweghị ihe ọ ga-eme ka a ghara ịrịa ụbụrụ na-arịa ọrịa na-edozi ahụ ma enwere ike iji ya dị ka ọnyà.
Ndị na-akọ na Maggot ndị na-aghọtaghi ma nye nri na-ewu ewu ma na-ere ya dị ka ndị na-agba ume ga-abụ ndị na-emebi.
N'ezie nke a bụ n'ihi na ha aghọtaghị. ma gbadoro naanị iji belata ọnụahịa nke nlekọta ruo mgbe eresị ihe ahia.
Ma maka ndị nke ị chọrọ ịzụlite na ịzụlite BSF, ọ dịghị atụ aro ịmalite ịzụlite ahịhịa site na ịzụrụ mkpụrụ osisi na-enweghị nchebe.
N'ihi na ị ga-azụ brood ị ga-azụ. Maggot ihe ubi nke na-echere ịzụta ngwaahịa nke Maggot ehi ga-aghọta otu esi azụlite ọrụ.
N'ihi na Maggot bụ isi nwere "njikwa ibu".
Kedu ihe a na-eji ebu ibu?
Gut load bụ usoro nke anumanu na-etolite ma nye nri ndị na-edozi ahụ iji nye ha nri ndị a na-eri anụ.
A na-ejikarị okwu a mee ihe na nkwadebe nke ikpuru bụ nke a na-eji mee ihe dị ka onye na-azụ anụ.
Ugo ndị a na-azụ maka azụmahịa maka ịzụ ahịa ahia ga-enwe uru zuru oke.
Site n'inye nri di oke elu tupu e tinye ya na broodstock, prepupa ga-enwe ezigbo mma dika umu. Ọzọ okwu.
A na-emekarị ihe na-arụ ọrụ site n'inye mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, na ọka ma ọ bụ ihe oriri na-edozi ahụ.
Ụfọdụ ngwaahịa ahịa na-enweta ma kwadoo kpọmkwem maka ibu nsị dịka M ma ọ bụ Magic Media Maggot.
Mpempe M atọ ma ọ bụ 3 M ngwaahịa nwere ngwakọta nke carbohydrates, abụba, protein, vitamin, mineral na eriri nri.
N'okpuru red ma ọ bụ cocoon, ọ bụ oge ebe kacha mma na-edozi ahụ. Nwa pupa (cocoon) dị n'etiti 10% -15% karịa karịa ụmụ nwoke.
Enwere ike ịchekwa ha n'ime ụlọ okpomọkụ ruo ọtụtụ izu, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị ndụ red, ị nwere ike ịchekwa ha na okpomọkụ nke 10-16 Celsius C.
Enwere ike ịkwadebe ikpuru ma ọ bụ red brood n'ime akpa ma nye mgbasa ozi dịka blanketị.
Ndị na-esonụ bụ nyochaa ihe ise ejiri mee dị ka blanket blanket. ntụgharị ọ bụghị iji mkpụrụ, ájá, ala humus, sawdust.
Pupa na ala na sawdust mkpụrụ bụ ngwa ngwa karịa ala ma ọ bụ sawdust. Nke kachasị ọhụụ bụ red na-enyeghị blanket (mkpụrụ)
Okpomọkụ, ezigbo BSF ndụ ndụ n'etiti ụbọchị 8-11 na 29-30 Celsius C. Ọkpụkpụ nke kachasị elu na okpomọkụ n'elu 30 Celsius C.
Nri, Azụmahịa na mmepe nke àkwá àkwá na-enwe mmetụta dị ukwuu site na ụdị ndepụta nyere. Ka ihe edozi na nri, ka BSF Lalt ka ukwuu. Ọzọ okwu. Ọkụ na-adịghị eri nri agaghị adacha ma ọ bụ ihe na-emekarị bụ obere nsen
Ìhè, ọkụ ọkụ dị mkpa maka mmepe nke BSF ijiji. BSF na-amasị ebe dị mma
Media, Media na ọdịnaya dị elu na-edozi onwe ya na ogo oke. Mgbasa ozi kachasị mma dịka M (Mwot media magic), nchịcha mmanụ (PKM).
BSF dị iche na nwoke na BSF Nwanyi
Azụ anụ ahụ dị obere
Azụ nku nwere oke karịa
Nke afọ 3 abdominal afo, na 6 na nwanyi
Mkpụrụ bụ nwoke na-enwe obi ụtọ na nwanyị a kapịrị ọnụ
Ụmụ nwoke enweghị mmekọahụ nwoke na nwanyị
Nsogbu Mgbochi Maggot
Isi ihe siri ike n'ịrụ ụlọ BSF bụ BAU. Lezienụ anya na ụzọ ziri ezi na nke ziri ezi site na mmalite.
Ọ bụrụ na ikpuru gị na-esi ísì, nke a bụ nnukwu nsogbu. E wezụga iru ala n'ihi na ísì pụkwara ịkpọ ndị anụ na pests ndị dị ka oke oke, ijiji na-acha uhie uhie, ncha, agwọ.
Na mgbakwunye na pesti, nnukwu ihe iyi egwu na-akụ anụ bụ ezinụlọ na gburugburu ebe obibi ngosi. Enweela ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-akpa anụ, bụ ndị a manyere imechi n'ihi na isi ísì ọjọọ ha kpatara.
2. Obere Ihe
Nsogbu ndị ọzọ kachasị njọ bụ mkpụrụ dị ala nke mkpụrụ ego ahụ ma ọ bụrụ na ejighị n'aka na-abịa n'ihu.
Mgbanwe nke nsụgharị nke na-eme ka ikpuru dị mkpa nye BOPF larvae ma ọ bụ àkwá ndị na-anọgide na-adị.
Ihe ngwọta bụ iwu BSF maggot colonies site na okike ka ọ bụrụ na a na-enye ya àkwá site n'ịkụ ha site na iji ngwá ọrụ dịka biotong.
Iji lụọ BSF dina nsen nwere ike iji paadị kaadi, mbadamba ahihia ma ọ bụ obere ụlọ maka ire ere na ụlọ ahịa ma ọ bụ foto.
Onye agha ojii nwere ike ịmịpụta nke ọma n'ime afọ nile na ebe okpomọkụ ma ọ bụ ebe okpomọkụ dị elu, ma na ọnọdụ ndị ọzọ, a chọrọ ụlọ greenhouses iji nweta nsen na oge oyi.
Ya mere, anyị nọ na Indonesia ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị okike ma dị uchu, ọ dịghị mkpa ka anyị chegbuo nsogbu a.
3. Nhọrọ Ziri Ezi
Ọ dị njọ n'ịhọrọ ụdị ofufe na ikpuru. Ọtụtụ ikpuru a na-azụlite bụ ijiji. Nke a ga-edozi ozugbo.
N'ihi na ijiji na-eche na a ga-azụlite si n'aka onye agha ojii na-efe kama ijiji nke na-ebu ọrịa.
Ọ bụrụ na amanye ịzụta osisi, zụta BSF maggot osisi dị mma ka nsonaazụ ndị ahụ wee nwee afọ ojuju. Ịzụta mkpụrụ osisi na-ebu oke ndụ ruo ogologo ndụ.
Ọ bụrụ na ịzụta osisi na enweghị ihe ọghọm na-agaghị ekwe nkwa na n'ikpeazụ ị ga-azụ ma zụta ọzọ.
Anyị abụghị Bruce Lee
Azụla BSF àkwá ndị e rere na gram. Ịkwesịrị ịmara nkwụ BSF a na-ere maka gram pụtara na ị na-azụtara nsen nsen n'ihi na ha "na-ese" site na ebe ha si.
Akwụsị BSF a ga-agbaji. Ya mere, ị na-azụta akwa a kwatara akwatu ma ghara ịcha.
Achọghị ịkọ mgbe ị na-ebuba àkwá ndị a ka ọ ghara idozi nke ọma nke na-emepụta BSF nsen na-agbasa na agaghị ada.
Onye na-ere bsf egg nsen yiri ka ọ bụ ọkachamara karia onye na-akọ akụkọ banyere Bruce Lee bụ onye nwere ike iwepu nsen na-enweghị ihe ọ bụla agbajiri.
Ihe ngwọta bụ ịzụta BSF àkwá kwa "ụyọkọ" nke ka na-emezughị kpọmkwem dị ka ọnọdụ nke égbè égbè na-etinye nsen ha.
Nke a bụ iji hụ na àkwá na-adịghị emebi emebi ma ọ bụghị agbajikwa nke mere na a zụrụ azụ zuru ezu kama nsen.
4. Ụdị Njọ
Ọ bụ ngwa nri ziri ezi na iji ichekwa 83%.
Iji mezuo nke a, ọ dị anyị mkpa ịmụta otú e si edozi ikpuru n'ime azụ na azụ anụ ọkụkọ nke bụ usoro ziri ezi.
5. Maggot ahia ahia
Ebee ka ịchọrọ ire ere-ikpuru mgbe e nyere gị nri n'onwe gị. Ebee ka ị chọrọ ire ere?
Ihe ngwọta maka nsogbu a dị mfe, ọ dị mkpa ka ị mụbaa azụ ma ọ bụ azụ anụ ọkụkọ.
Ma ọ bụrụ na ịnweghị ike n'ihi ụfọdụ ihe kpatara ya, ị ghaghị ịmalite iche echiche ebe ị ga-ere ere?
Ihe ngwọta dị mfe, na-ere ikuru gị na Yurie BSF, ị na-anata nkịta ugbu a na Rp7.000 maka klas.
Ọnụahịa a dị elu karịa ahịa nke dị naanị Rp4.000-Rp5.000 kwa klas.
Yurie BSF zụrụ oke idozi ọnụahịa gị n'ihi na ọ dị anyị mkpa ka a sụgharịa ya na nri anụmanụ ma kesaa karịa 99 n'obodo Indonesia.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na-eme kpọmkwem na ala mggot kacha nso n'obodo gị, ị nwere ike ịlele adreesị na saịtị a ma ọ bụ kpọtụrụ Ms. Yurie na 0812-2105-2808.
6. Naghị emepe emepe
Ịzụlite ahịa achụmnta ego. Dị ka ọ dị, ma ọ bụrụ na mbụ ị na-eche banyere ịpụta oke.
Maka mbido, ọ bụ nanị iji belata ọnụahịa nke nri ụmụ anụmanụ. Ka oge na-aga, nkà gị ga-aba ụba ma na-ebuwanye ibu na-ewe ihe ubi.
Nye ụfọdụ ndị, n'ezie mkpa enyemaka iji nọgide na-azụlite. Ya mere, Yurie BSF na-abịa na usoro ihe omume nke inye ndị enyi Yurie BSF nile nke Rp100.000.000 maka onye ọ bụla na nke a na-ahazi maka mkpa ego.
Ihe a chọrọ iji nweta ego a bụ na ị ghaghị ịzụrụ Yurie BSF n'ahịa. A ghaghị ịnyeghachi onyinye a site n'izipụ ụgbụ gị na Yurie BSF.
Ọnụ ego nkwụghachi ahụ anaghị adọrọ mmasị ma ọlị. Anyị anaghị anabata RIBA. N'agbanyeghị uru nke enyemaka anyị na-enye, enweghị nchịkọta nchịkwa.
Mgbe ahụ ị na-akwụ Maggot uru ahụ.
7. Edeghị ya
Onye na-elekọta ubi nke na-eme ka ọ bụrụ na ị na-arụpụta ihe na-aga nke ọma. Ntuzi ubi dị ezigbo mkpa n'ihi na nsogbu ndị ị na-enwe kwa ụbọchị bụ "yiri" na nsogbu nke ndị ọrụ ugbo n'ebe ndị ọzọ.
Nke a bụ ebe usoro DUTA YURIE BSF na-arụ ọrụ n'ugbo gị. Nye nduzi nke oma dika ọnọdụ na ọnọdụ.
Site na ndoro-ndoro ochichi nke Yurie BSF, ị gaghị anọ naanị gị. IHE ANYỊ NA-EBE ỌZỌ site n'ịmụta ihe ka anyị na-enwe ekele maka inyere ndị ọzọ aka ka ihe ịga nke ọma ga-agwụ.
8. E nweghị nkwa
Ihe anyị na-eche bụ nduzi ruo mgbe ịkụzi ikpuru ị ga-enwe ọganihu ga-aga nke ọma.
Ọtụtụ puku ndị enyi Yurie BSF ebe ha maara na 2007 ka nọ n'okpuru Yurie BSF. Ọ BỤGHỊ ỌZỌ RUPIAH KWURU.
Ọ bụghị ihe nkwụsị?
Ee ee, ụkpụrụ anyị ga - aga nke ọma. Ọ bụrụ na ezigbo enyi Yurie nwere ezigbo ihe ịga nke ọma, a ga - ere ya na Yurie BSF. Ọ pụtara na anyị kwesịrị ibe anyị.
9. Nnukwu Ahịa
Kedu ka ị ga - esi nye nri anụ ọhịa ma ghọọ akụkụ nke ahịa ụwa? A na-eme atụmatụ mkpa nri anụ ọhịa 2019 ka ọ bụrụ karịa 20-21 nde tọn nri anụ. Azụmahịa azụmahịa na-enye obi ụtọ.
Maggot Cooperative bụ nke mba Indonesian, dịka ntụpọ maka nzuko na ịzụ na ịzụ ahịa azụmahịa ndị ọzọ.
Ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ na-emekarị ka ha daa na ebe ikpuru ha. Larvae bụ ihe kasị mma n'ịtụgharị "nsị" dị mma n'ime nri ụmụ anụmanụ.
Nkuru dị mma n'ịgbanwe ihe dị elu nke cellulose (akwụkwọ, kaadiboodu, epupụta, ihe ọkụkụ ma e wezụga osisi) n'ime ala ndị dị mma.
Earthworms na-eto nke ọma na residues nke ọdịda nku, ma mmiri mmiri na-ekpuchi na-agụnye enzymes ma na-abụ oke acidic maka ikpuru.
Mkpa dị iche
Ọrụ dị elu nwere ike ịnọgide na-enwe okpomọkụ gburugburu 37 Celsius C (100 Celsius F), ebe ikpuru chọrọ oyi na-ekpo ọkụ.
Ihe ka ukwuu n'ime mgbalị ndị a na-eme iji mee ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ikpuru na ikpuru dị n'otu akpa, n'otu oge ahụ enweghi ihe ịga nke ọma.
Nkuru nwere ike ịnarị n'okpuru mkpofu mgbe ala bụ ala. Nkuru nwere ike ibi na nkata nkata mgbe enweghi otutu otutu.
Enwere ike ịgbakwunye ikpuru ma ọ bụrụ na ndị na-eto eto nọ na-ala ala (na oyi) na ikpuru nwere ike ịzụlite na nkata nkata mgbe ọ na-echere àkwá site na ijiji ndị agha ojii.
Dị ka nri, BSF larvae amaghị dịka ndị agha intermediary maka ikpuru nke parasitic nke na-efe efe nnụnụ, ebe ikpuru uhie bụ ọtụtụ anụ ụlọ.
BSF Maggot Ọrịa
N'ebe ọdịda anyanwụ Africa, Dirhinus giffardii achọpụtawo dị ka parasitoid nke red H. illucens ma belata mmepụta anụ.
Nke na - ebute mbenata ngwaahịa ruo 72%. A na-ebu nje ndị a site na beps na usoro nlezianya iji chebe ebe ndị ahụ na-agbasawanye site na mwakpo ụra.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi zụlite ahi. A pụrụ iji usoro mgbasa ozi dị iche iche meepụta ikpuru dịka mkpofu, ihe mkpofu na nri.
Mgbasa ozi ọ bụla a na-eji, họrọ mgbasa ozi dị mfe ịnweta na "ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'efu".
A gaghị atụ aro ka ị jiri mgbasa ozi site na ịzụrụ dịka iji bran.
Ogwu nke mgbasa ozi mgbasa ozi nke mgbasa ozi na mgbakwunye na oke nkuru oke mebiri bu kwa ala. N'ihi na ọdịnaya dị mma na bran dị ala.
Ụdị Igwe Nchịkọta Nchịkwa Maggot
Nkuzi nke ndi anu ohia anu ugbo
Ịzụlite Maggot Media
Anụ osisi anụ ọhịa anụ
Otu ụzọ isi zụlite ahịhịa bụ site na iji anụ ụlọ.
Maggot ịzụ anụ na anụ ụlọ bụ ụzọ dị mma isi mepụta nnukwu oke na oke ego.
Kedu ụdị anụ ụlọ a ga-eji mee ihe dị ka usoro maka ịkụ anụ.
N'ikpeazụ, a pụrụ iji nri anụ ụlọ niile mee ihe dịka ndị na-emepụta ihe oriri. N'ihi ya, ọ dịghị ihe mere ị ga-eji zụta ihe ndị na-emepụta ihe oriri.
Ihe nlere nke nri maka ndi ozo ndi ozo
Azụ anụ nri
Maggot ịkụpụta na mgbasa ozi sitere na mkpofu ihe mkpofu nke tofu, ma ọ bụ nkwụ a na-atụ aro ya n'ihi na ọ gbakwunye na ịpụta mma nkịta ọma.
Nakwa ịbụ ihe ngwọta maka mmetọ nke nsị nke na-atụba n'ime osimiri ahụ.
N'otu aka ahụ, mmanụ nkwụ na-adịghị eji ya ma tụfuo ya na mmanụ nkwụ. Ọ bụ ezie na mmanụ nkwụ bụ ezigbo mma dị ka ikuru ihe na-emepụta ihe.
Ihe nlereanya nke ihe mkpofu maka mgbasa ozi ndi ohia
Mkpụrụ Epe Mmanụ
Ngwunye organic bụ nsogbu gburugburu ebe obibi ugbu a, ọ na-amụba ebe niile. Nwere ike ịbụ onye na-ajụ maka nsị.
A na-atụ aro magburu onwe ya na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-eme ka ọ dị mma ma na-enyere aka n'ịkwụsị nsogbu nsogbu.
Nsogbu nke mkpofu bụ nsogbu ụwa, ọ bụghị naanị na Indonesia.
Ọ na-aghọ ihe dị mpako ma ọ bụrụ na anyị bụ otu n'ime obere akụkụ iji nyere aka dozie nsogbu mkpofu a site n'iji ihe mkpofu a mee ihe n'ime mgbasa ozi na maggot cultivation.
Ụlọ ọgwụ kwụsịrị
Maggot na ngwaahịa
N'okpuru ahihia ma ọ dịkarịa ala, anyị ga-emepụtara ngwaahịa ngwaahịa ndị dị na ya
Maggot na Nhazi
Liquid Organic Fatịlaịza
KasGot (maggot former) bụ obere nha (dịka ájá) ájá sitere na maggot ka ọnụ ọgụgụ nkịta na-emeghe. KasGot sitere na nri na-eri nri nke maggot na-eri ma na-atụgharị ya na ntụ ntụ.
A na-akpọ usoro a vermicomposting. Uche nke ụlọ ndina na-adabere kpamkpam na usoro nlezi anụ. Kasgot anaghị adabere na ụdị ihe onwunwe ọ na-ere.
Kasgot nwere nnukwu nri na ihe oriri na-edozi ahụ yana vitamin. Kasgot dị mma maka imezi nri ala, ibu na mmepụta mkpụrụ osisi na akwukwo.
Fatịlaịza na-eme ka e nwee ọgwụ ndị na-arụ ọrụ iji kpalite uto nke mgbọrọgwụ osisi. Nke a bụ ozi ọma nye ndị ọrụ ugbo n'ihi na egosila na ọ dị irè iji melite ogo mmepụta nke akwukwo na osisi osisi.
Kasgot bara ọgaranya na Hara
Kasgot sitere na usoro mgbu nke ahụ ma ọ bụ vermicompost dị nnọọ ụba na nri ndị dị mkpa maka ọmụmụ ala.
Kasgot nwere nri zuru oke (nnukwu na micro kemist). Na usoro nke kachasị, ọ na-abanye ugboro abụọ n'usoro ngwongwo.
Nke mbụ, usoro dị mkpa nke nje bacteria tupu ị na-eri maggot. Nke abụọ, usoro a na-eme site na ya, nke bụ mgbe okwu ahụ dị n'ime afo nke ikpuru.
Nke ahụ na-enwe nkwarụ site na usoro mmezi ahụ. Ya mere, a maara ikpuru dị ka njikarị nke bio degradable.
Osisi na-akpali akpali
Ihe ndị dị n'ime ụzụ dị njikere ka osisi na ụzụ nke nwere microbes na-eto eto na-eto eto, n'ihi ya, ha nwere ike inyere aka ngwa ngwa ngwa ngwa.
Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụmụ nje nọ na ọgba aghara na-eme ka mmepe nke ihe oriri na-eme ka ngwa ngwa dịrị n'ụdị osisi chọrọ.
N'iji N, P, K POC KasGot (Jiri Maggot)
Ihe N N
3 Aṅụ anụ 0,96 0,68 1,68
4 Ọnyịnya 0,49 0,73 0,83
5 Ọkụ Nri 2,72 6,32 2,03
6 Dọkpu Duck 0,84 1,81 0,42
7 Nri nri 0,61 0,31 0,18
8 Ezi nri 1,24 1,83 0,74
Njirimara Organic Fatịlaịza Afọ
Ihe oriri na-edozi nke ikpuru dabeere na isi nri na-enye mwuru.
N'ihe dị iche iche na ndepụta ahụ, ihe dị iche iche na-edozi ahụ dị iche iche. Mana n'ozuzu, ọdịnaya dị mma nke kasgot bụ:
Ụdị (P) 0,35%
41,23% na ikike nchekwa mmiri
Uru nke Kasgot Fatịlaịza
Ọ dị ọnụ ala n'ihi na ihe ndị na-eme ka fatịlaịza kasgot bụ ihe ndị na-emepụta ihe ndị dị gburugburu anyị.
Fatịlaịza Cashmere anaghị emerụ ala n'ihi na ọ naghị enwe kemịkal. Nke a na-eme ka fatịlaịza furu efu nwere ike iji ya rụọ ọrụ mgbe niile ma ghara ịkpata mmetụta ọjọọ maka ala ma ọ bụ osisi.
Ebube fatịlaịza nke Kasgot
Ịdị irè osisi adịghị ngwa ngwa dịka nri fatịlaịza. N'ihi na a na-eme ka fatịlaịza na-emepụta ihe na-eme.
Na-enye aka na osisi vegetative na mkpokọta mkpụrụ maka mkpụrụ osisi ornamental, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi. Na-enye aka mee ka ọdịdị nke osisi dịkwuo mma.
Ụcha agba, udidi na nhazi dị mma. Kasgot dị mma dịka ngwakọta nke mgbasa ozi na-eto eto na-akwalite.
Nwere hormones iji meziwanye ahụ ala, kemịkal na ihe ndị dị ndụ. Nchekwa iji mee ogologo oge n'ihi na enweghị chemicals.
Ọgwụgwọ maka eji ọdụdụ Kasgot
Fatịlaịza kasgot maka poti 1kg jikọtara ya na ala 3kg, ebe ọ bụ na 6-10 n'igwe kpụ ọkụ n'ọnụ nke ọ bụla 10m2
Ọnụ ụzụ ahụ na-adabere n'ụdị osisi na ọkwa ọmụmụ nke ala a ga-eme ka ọ bụrụ nke ọma.
Liquid Maggot Organic Fatịlaịza
Mkpụrụ nke maggot mmiri mmiri organic fatịlaịza (POC) bụ na o nwere ihe nitrogen, phosphorus, potassium na ọdịnaya mmiri, nwere ibu stimulants na nwere ike igbochi mbata nke dị iche iche osisi pests.
Ụdị na àgwà nke mmiri mmiri organic fatịlaịza
Maggot mmiri mmiri organic fatịlaịza kwesịrị na mgbakwunye. Ebe ọ bụ na a ga-echekwa kasgot maka ogologo oge na mgbasa ozi, jiri nnukwu akpụkpọ ụkwụ.
Ọ bụ ezie na ihe oriri nke mmiri mmiri maggot organic fatịlaịza bụ ihe susceptible mmiri mmiri na evaporates.
Ma, enwere uru dị iche iche mgbe ị na-eji POC maggot bụ nke dị mfe iji akwụkwọ na osisi mkpụrụ osisi na-egwu ala ma na-eje ozi dị ka onye na-akpali akpali maka mkpụrụ osisi na mkpụrụ.
Karịsịa mgbe epupụta mkpụrụ osisi ahụ malitere ịmalite. Maggot POC dị mma n'ihi na ọ nwere ike itinye uche na ya site na stomata ma ọ bụ pores.
Ịnye POC Maggot ga-aṅa ntị na usoro onu ogwu nke mere ka ọ ghara imebiga ihe ókè ma gbuo ọnwụ na osisi.
Osisi na-enweghi ike itinye ihe oriri karịa 2% kwa ụbọchị.
Ọgwụgwọ maka iji POC Maggot
Tinye POC na mmiri dị ọcha. Mgbe agwakọta mmiri ọhụrụ ahụ, ọnye ahụ adịghị karịa 2% ma ọ bụ maka ihe ọ bụla 1 liter nke POC machie na mmiri 100 lita.
Ịgba na oge na-agbanwe site na vegetative iji na-emepụta mkpụrụ nke na-amị mkpụrụ, mkpụrụ ma ọ bụ tubers.
Ghazi oge nchịkọta nke POC ma ọ bụ otu ugboro n'izu n'oge ọkọchị. Mgbe oge ahụ malitere, gbasaa 3 otu ugboro kwa ụbọchị n'ihi na mmiri mmiri ozuzo lara n'iyi POC.
A ga-edozi dose nke POC maggot ka ụdị osisi ahụ nye POC maggot.
A ghaghị ịhazi ụdị mkpụrụ dị n'ụdị prepupa ma ọ bụ maggot larvae n'ime ihe ndị dị iche iche.
Enwere ike ịchekwa nke a na mgbakwunye na ịmepụta mkpụrụ ahụ maka ogologo oge. Na-eji mgbe achọrọ.
Enwere ike iji Maggot maka nri anụmanụ? Otu n'ime nri ndị dị na maggot bụ protein,
Ma umu anumanu na umu mmadu choro protein a. Ya mere, a ga-enye ụmụ anụmanụ ikpuru. Azịza ya bụ anụ ụlọ ọ bụla nke chọrọ protein anụmanụ.
Ọ bụ naanị na ọkwa nke protein nke anụmanụ ọ bụla chọrọ dị iche. Ya mere, ihe ngwọta bụ ịhazi ihe dị iche iche na mbụ.
A na-ahazi usoro protein dịka mkpa nke anụ ụlọ.
Maggot dị mma maka nri nnụnụ
Anis Kembang Nnụnụ
Nnụnụ nke Sandalwood
Bird Cucak agba
Nnụnụ Chirping Cucak
Ninja nke Hummingbird
Maggot dị mma maka nri ndepụta ọkụkọ Bangkok
Wido Chicken ma ọ bụ Jalak
Ọkụ Chicken Sri Lanka
Chicken Cotton (Silkie Hen)
Egwuregwu Egwuregwu Ayam nke Oge a
Ụkwụ Chicken Naked
Chicken Polish ma ọ bụ Poland
Ezigbo Maggot maka Ngwunye Ngwurugwu Na-agba Egwuregwu
Alakụkụ Fayoumi Ijipt
Nnukwu anụ ọkụkọ
Maggot dị mma maka ndepụta anụ ọkụkọ
Maggot dị mma maka nri nri
Dumbo Catfish anụ ọhịa
Azụ anụ anụ Pearl
Maggot dị mma maka nri tilapia
Nila kacha mma
Ezigbo Maggot maka Nri Anumanu
Magelang Local Duck anụ
Tegal Local Duck anụ
Albino Duck anụ
Tiktok Duck anụ
Alabio Duck anụ
Mojosari anụ nwa ehi
Buff Duck Duck anụ
Cirebon Duck ma ọ bụ Rambon
Khaki Champbell Duck anụ
Tegal Duck anụ
Maggot dị mma maka anụ nri anụmanụ
Chọrọ ịmụta ịmụta
Na-eduzi na nri?
Lelee ebe 99 maka ebe nchekwa